CONELE ihe mgbapụta ụgbọala - China Qingdao CONELE Group
CONELE ihe mgbapụta ụgbọala na-emepụta site Qingdao CONELE Group Co., Ltd., iji elu ahụmahụ n'ụlọ na mba ọzọ na oge a na elu na kọmputa ịme anwansị technology ka n'usoro nyochaa nchegbu na displacement nke mgbapụta ụgbọ ala Ọdịdị. Mmetụta dị iche iche kwa dị ka eke ugboro na ike ọgwụgwụ ndụ nke ọganihu na-atụle. N'otu oge, ndị haịdrọlik usoro na kachasị na ọhụrụ free ọmụmụ technology na nakweere ka ukwuu belata mmetụta nke mgbapụta commutation na ọganihu. Anyị nwere ọtụtụ nchọpụta Kemịkalụ na njikarịcha nke ọganihu Ọdịdị na imewe nke haịdrọlik usoro.
The zuru okè ngwaahịa mma-achịkwa, ihe oké ngwaahịa rụpụta, na lezie quality nnyocha na-eme CONELE mgbapụta ụgbọ ala iru anụ ụlọ na-eduga, mba elu larịị, ogwe-aka usoro niile jiri mere ígwè efere na elu ike oyi akpọrepu ígwè efere, Mmụba ike n'elu 1000Mpa ana achi achi elu ike na ìhè arọ nke ọganihu usoro. 100% nke ogwe aka ya, ụkwụ ya na mmanụ ụgbọala tankị na-welded na-akpata nchekasị na ọgwụgwọ. Onye ọ bụla Weld nke ọganihu usoro a na-anwale 100% na-enweghị mebiri ma ọ bụ X-ray photos iwepụ ọ bụla zoro ezo ntụpọ n'ụzọ zuru ezu na-eme ka ọ na ndị ọzọ inogide. Anyị chepụta ka ezi ụbọchị site waya mmewere analysis na ike ịme anwansị analysis iji hụ na ezi uche Ọdịdị na magburu onwe arụmọrụ nke ọganihu usoro. Na ngụkọta oge na analysis pụta nke jib Ọdịdị na-kwupụtara site na steeti-larịị testing center maka nchegbu-nje ule iji gosi ihe ndị na-agbanwe agbanwe na n'ezie na-arụ ọrụ ọnọdụ.
CONELE Group mgbe siri ọnwụ na ahịa na-agba mbọ, na ọtụtụ afọ nke nnyocha na mmepe, mmepụta ahụmahụ nke mgbapụta ụgbọala, dị ka ndị ahịa chọrọ, e mere na ngwaahịa dị ka ndị ahịa 'arịrịọ, anyị na-agbalị na-enye gị ihe kasị kwesịrị ekwesị maka ndị na-ewu mkpa nke mgbapụta ụgbọala, nke mere na ahịa "na họrọ nri onye, ​​ọ dịghị mkpa ka ndị dị oké ọnụ."
Post oge: Feb-17-2020